पंकजको आमाबुबा मिडियामा, प्रिन्जूको रहस्य खोल्दै भने ३ छोराछोरीको आमालाई म’र्न तयार छौं बुहारी स्विकार्दैनौं (भिडियो हेर्नुस्) – Classic Khabar
पंकजको आमाबुबा मिडियामा, प्रिन्जूको रहस्य खोल्दै भने ३ छोराछोरीको आमालाई म’र्न तयार छौं बुहारी स्विकार्दैनौं (भिडियो हेर्नुस्)
August 6, 2021 297
पंकज भट्टराई र प्रिन्जु भट्टराईको विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । पंकजका बुवाआमाले कुनै पनि हालतमा प्रिन्जुलाई बुहारीका रुपमा स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । प्रिन्जुले आफुलाई बिचल्ली बनाएर हिँडे भन्ने आरोप लगाएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । उनको वास्तविक नाम हिमादेवी भट्टराई हो । उनी साविक बालुवारी ६ की हुन् भने अहिले कचनकवल वडा ३ माबस्छिन् ।
उनी पंकजको घरमा आफ्नो वहिनीको विवाहको कुरा लिएर आएको पंकजकी आमाको भनाई छ । पंकजको बुवाले प्रिन्जुलाई चिनेको भएपनि आफ्नो छोराको श्रीमती भने नभएको दावी गरेका छन् । उनले प्रिन्जुलाई आफुले काकी भन्नुपर्ने बताउँछन् । बहिनीको लागि केटा हेर्न आएकी महिलाले आफ्नो क ब्जामा राखेको आफुले अहिले थाहा पाएको बताए । आफ्नो छोरा ५ महिना देखि सम्पर्क विहिन भएको उनको भनाई छ ।
मैले छोरालाई ३३ लाख रुपैया खर्च गरेर पढाएको थिएँ । अमेरिका जानका लागि उनले प्रिन्जुसंग सम्पर्क गरेको बुवाको भनाई छ । छोराले म अमेरिका जान्छु बुवा भन्यो, अब मेरा पनि दिन फर्किने भए भन्ने सोचे तर ५ महिना मेरो छोरा सम्पर्क विहिन भयो ।
एकै पटक खेम देवानको मिडियामा छोराको कुरा सुन्दा म छक्क परे । अमेरिका गएर अब छोराले पैसा पठाउला भनेको पंकज मिडियामा देख्नुपर्दा मलाई के भयो होला ? हिँजो घर भित्रकै काकी बनेर आएकी महिला अहिले छोराको श्रीमती हो भनेर बोलेको सुन्दा मलाई के भयो होला, बुवाले भने । ति महिलाको २ छोरी र १ छोरा समेत रहेको आफुलाई थाहा भएको बुवाको भनाई छ ।
Prevश्रृजना बस्नेत मृत्यु घटनामा यो कस्तो मोड ! सिआइबी टोली पुग्यो विर्तामोड
Nextपक्राउ परेका जाजरकोटका वडाध्यक्षले के दिए यस्तो वयान ? (भिडियो हेर्नुस्)
दिउसो बुबाले भेटेर घर पुगेका बुबालाई साझ छोरीको साथीले हेर्दा पासो लगाएर आत्म ह*त्या गरेको खबर पुगेपछी ….